”हेर्नुहोस”नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका २६ जना को को (विवरणसहित) – Sandesh Munch
June 26, 2020 220
काठमाडौं, ११ असार । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट २६ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप दुई पुरुषको मृत्यु पुष्टि गरेको छ । योसँगै २१ पुरुष र ५ महिला छन् ।
आज मृत्यु हुनेहरु स्याङ्जा र ललितपुरका पुरुषहरु छन् । उनीहरु दुवै विगत केही समय देखि अन्य रोगका संक्रमित पनि रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
मृत्यु भएकामा स्याङ्जाको आँधीखोला घर भएका ५६ वर्षीय पुरुष किराना पसल गर्दै आएका थिए । ज्वरो आएपछि ७ असारमा फेवा सिटी अस्पतालमा लगिएकोमा कोरोना शंका लागी उपचार गर्न नमानेपछि गण्डकी अस्पताल लगिएको थियो । ८ असारमा कोरोना पुष्टि भएपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचारका क्रममा १० असारमा मृत्यु भएको थियो । ११ असारमा शव व्यवस्थापन भइसकेको छ । शव व्यवस्थापनका क्रममा स्थानीयले विरोध गरेपछि गोली समेत चलाइएको थियो ।
अर्का पुरुष ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका ५ का पुरुष हुन् । उनको ५ महिना अघि मृगौला प्रत्यारोपण भएको थियो । कोखा दुखेपछि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका उनलाई पाटन अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो । ११ असारको विहान मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि मृत्यु भएकाहरुमा दैलेखका दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नं ३ का ४५ वर्षीय पुरुष हुन् । उनको ८ असारको बेलुका सुर्खेत अस्पतालको आइशोलेशनमा मृत्यु भएको थियो । क्षयरोग तथा दमको बिरामी भई ३ असारमा अस्पताल भर्ना भएका उनलाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
यसैगरी, गुल्मीका एकजना मृतक पुरुषको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । ६९ वर्षीय मृतक उपचारका लागि भारत गई २५ जेठमा स्वदेश फर्किएका थिए । गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका ५ महेन्द्रनाडा घर भएका उनी प्यारालाइसिस रोगको उपचारका लागि भारत गएका थिए । स्वदेश फर्किएपछि उनी होम क्वारेन्टाइनमा रहेकोमा ५ असार मा घरमै मृत्यु भएको थियो । मृत्युपछि उनको सोही दिन नमूना संकलन गरी पठाइएकोमा ६ असारमा कोरोना पुष्टि भएको थियो । उनको नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको छ ।
अन्य मृतकमध्ये कैलाली, गोदावरी नगरपालिकाका ४६ वर्षीय पुरुष हुन् । बस व्यवसायी उनी सेती अस्पतालमा उपचाररत हुँदा ३ असारको साँझ मृत्यु भएको थियो । सिमानाकामा मानिसहरु बसबाट ओसारपसार गर्दै आएका उनको धनगढीको नवजीवन अस्पतालमा उपचार गर्दा जेठ ३१ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सेती अस्पताल सारिएको थियो ।
यसैगरी, कैलालीको लम्किचुआकी ४३ वर्षकी महिलाको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उनको टाउकोमा चोट लागेपछि नेपालगञ्ज मेडिकल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । २ असारमा शल्यक्रिया गर्नुअघि नमुना संकलन गरेकोमा सोही दिन नै मृत्यु भएको जिथयो । मृत्यु भइसकेपछि ३ असारको साँझ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
यसअघि हिजो पत्ता लागेकी मृतक बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका ६ की ४६ वर्षीया महिला हुन् । फोक्सो, मृगौला र प्यारालाइसिलकी विरामी उनको १ असारमा आइसीयुमा मृत्यु भएको थियो । स्वाब परीक्षणका क्रममा उनको संक्रमण पुष्टि भएपछि ३ असारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।
यसैगरी संक्रमणबाट मृत्यु भएकामा गुल्मीका ३६ वर्षीय पुरुष हुन् । उनी रेसुङ्गा नगरपालिकाको आइशोलेशनमा रहेकोमा ३१ जेठमा मृत्यु भएको थियो । भारतबाट फर्किएपछि आइशोलेशनमा रहेकोमा स्वास्थ्यमा समस्या आएको थियो । उनलाई क्यान्सरको समेत संक्रमण थियो ।
३१ जेठमा दुईजनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको थियो । मृतक एकजना बारा निजगढका ५ वर्षीय बालक हुन् भने अर्का बेवारिस रुपमा फेला परेका २५ वर्षीय पुरुष हुन् ।
पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका घन्टाघरमा २५ वर्षीय युवकको २८ जेठमा बेवारिसी लास फेला परेकोमा पोष्टमार्टमका लागि लगिएको थियो । स्वाब परीक्षणका क्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको थियो । ३० जेठमा संक्रमण पत्ता लागेको र ३१ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्का बालक बारा जिल्ला निजगढ नगरपालिका ६ योजनाटोल निवासी हुन् । उनलाई ज्वरो आएपछि वीरगञ्ज अस्पताल लगिएकोमा आरडिटी गर्दा पोजेटिभ आएपछि आइशोलेशनमा राखी उपचार शुरु गरिएका थियो । स्वाब परीक्षण गर्दा ३० जेठमा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको । प्रयोगशालाको नतिजा नआउँदै ३० जेठमा मृत्यु भएको थियो ।
यसअघि मृतक अर्घाखाँचीको मालारानीको क्वारेन्टाइनमा बसेका ५७ वर्षीय पुरुष हुन् । उनको स्वास प्रश्वासमा समस्या आई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार गराई फर्कंदा कोद्रेखोलामा २८ जेठमा मृत्यु भएको थियो । मृतक पुरुषको स्वाब संकलनका क्रममा २९ जेठमा कोरोना संक्रमण पत्ता लागेको थियो । ती पुरुष १२ दिन अघि मुम्बईबाट आई क्वारेन्टाइनमा राखिएका थिए ।
अन्य मृतकमा भरतपुर महानगरपालिका वडा ११ का निमोनिया संक्रमित पुरुषको २६ जेठमा पुष्टि भएको थियो । निमोनिया संक्रमित उनको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।
यसैगरी, २६ जेठमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका घर भएका ५८ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्यु पश्चात नमुना परीक्षणका क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यसअघि मृत्यु हुनेहरु विभिन्न जिल्लाका छन् । डोल्पाका ५८ वर्षीय पुरुषको मृत्यु २० जेठमा भएको थियो । जगदुल्ला गाउँपालिका ३ घर भएका उनको २४ जेठमा पत्ता लागेको थियो ।
यसैगरी २४ जेठमै कोरोना संक्रमण पत्ता लागेकी सेती अञ्चल अस्पतालकी ५५ वर्षीया महिला धनगढी ४ की हुन् । मृगौला रोगी उनको डायलसिस गर्ने क्रममा २३ जेठमा मृत्यु भएको थियो । सेती अस्पतालमा डायलसिसका लागि आउँदा त्यही बेलामा मृत्यु भएको उनको कोरोना संक्रमण भेटिएको थियो ।
यसअघि सुर्खेतका पुरुषको हिजो मृत्यु भएको थियो । कोरोनाबाट मृत्यु पुष्टि भएका २० वर्षीय युवक ७ जेठमा भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए ।
पञ्चपुरी नगरपालिका १ हाँसे घर भएका उनको त्यतिबेला परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएपछि २२ जेठमा घर गएकामा त्यहीं मृत्यु भएको थियो । युवकको परीक्षणबाट पोजेटिभ आएको पुष्टि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले गरेका छन् ।
पाल्पाका एक पुरुषको मृत्यु पुष्टि भएको थियो । उनी सिलुवाखोलाका ४५ वर्षीय पुरुष हुन् । उनी स्थानीय क्वारेन्टाइनमा राखिएको र स्वास्थ्यमा गडबडीपछि तीन दिन अघि मिसन अस्पताल पाल्पामा लगिएको थियो ।
उपचारका क्रममा ती पुरुषको २० जेठमा मृत्यु भएको थियो । स्वाब संकलनका क्रममा संक्रमण पत्ता लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए । मृतक पुरुष पाँच दिन अघि भारतबाट आएका थिए ।
२१ जेठमा थप एकजनाको मृत्यु भएको थियो । मृतक पुरुष १३ जेठमा सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको र १५ जेठमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको थियो । मृतकलाई यसअघि हेमोरेजिक स्ट्रोक भएको र अपरेशन भएको थियो । उपचारका क्रममा उनको २१ जेठमा टिचिङ अस्पतालमै मृत्यु भएको थियो ।
१७ जेठमा मृत्यु भएका दैलेख दुल्लु नगरपालिका घर भएका ३५ वर्षीय पुरुषको कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो । दुल्लुस्थित पटांगिनी बजारको क्वारेन्टाइनमा रहेका उनी एक्कासी ढलेको र केही समयपछि मृत्यु भएपछि परीक्षणका लागि जुम्लामा स्वाब परीक्षणका लागि लगिदा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
Prevके यो साँचो नै हुन् त ”चीनतर्फ सीमा अतिक्रमित छैन : परराष्ट्र”
Next”दुखद खबर”ब्राजिलमा कोरोनाले एकैदिन १ हजार बढीको मृत्यु, ४० हजार बढी थपिए
कोरोना संक्रमित भेटिएपछि मैतीदेवी क्षेत्र सिल